Amin'ny inona no tokony hikorontana vehivavy mainty hoditra, fotsy sy fotsy?
Amin'ny inona no tokony hitafy jeggings? Sary nalaina tamin'ny jeggins
Ny jeggins, na ny leggings amin'ny denim, dia nahazo ny laza malaza amin'ny ankizivavy sy ny vehivavy samy hafa taona. Mitondra vehivavy tsara tarehy izy ireo amin'ny karazan'olona rehetra, satria manamboatra ny silhouette izy ireo ary mahatonga azy io matevina sy mahavariana na dia eo aza ny vidiny fanampiny.
Sary misy jeggins
Ny joggings tamin'ny vehivavy dia niseho teo amin'ny tsenan'ny lamaody vao haingana. Mandritra izany fotoana izany, ity modely ity, izay mampifangaro ny endriky ny pataloha sy ny leggings jeans, dia efa nomena ny ankamaroan'ny vehivavy manerana izao tontolo izao. Jaggins dia natao tamin'ny totozy manokana mitaingina ny mason-koditra, ny bokotra, ny paosy ary ny singa hafa. Na dia mijery tsara azy aza izy ireo dia tokony hianatra ny fomba hifaneraserany amin'ny akanjo hafa, akanjo sy akanjo hafa ny vehivavy lamaody.
Ny leggings amin'ny kavin'orona any amin'ny alokaloka dia mijery tsara indrindra amin'ny ambony be. Tsy tokony hikorontana amin'ny zavatra izy ireo, tsara kokoa ny mametraka lobaka manga amin'ny famotsorana , na ny fehiloha izay mifanohitra amin'ny farany ambany amin'ny sary. Noho izany, ny pataloha-jeggins ny loko mainty dia tokony hifanaraka amin'ny jumper lava, ny akanjo manga na ny fotsy hoditra, ary ny endriky ny pastel.
Amin'ity tranga ity dia tsy tokony hisaron-tava ireo pataloha ireo amin'ny kifety iray mampiseho ny vodin'ny vatana mangatsiaka manodidina azy. Io fitambaran-damba io dia manjavozavo sy marefo, noho izany dia tokony hohalavirina tsara izy io. Mandritra izany fotoana izany, ny valiny amin'ny fanontaniana mikasika ny zavatra tokony hodiavina mainty amin'ny kiraro dia mety ho zavatra. Izany dia mety amin'ny kiraro na kapa amin'ny kiraro, ary ny kiraro avo, ary ny kiraro kiriodra.
Ny fehin-kiraro amin'ny faka tahaka ny hoditra dia tsy mahazatra loatra ary manintona, kanefa, tsara kokoa ho azy ireo ny mitondra olona tompon-trosa. Ankoatr'izany, ao anatin'io pataloha io dia mety ho mafana amin'ny andro mafana, noho izany dia tokony hesorina ao am-patana izy ireo amin'ny lohataona na ririnina. Raha tsy izany dia tsy misy fahasamihafana amin'ny karazana hosoka hafa ny felana vita amin'ny hoditra, ary tokony hampifanaraka amin'ny kiraro sy ny ampahany amin'ny sary, amin'ny fampiharana ireo fitsipika ankapobeny.
Ny jeggies vehivavy fanao amin'ny lamaody dia hahatonga ny fijery hitovitovitra sy sexy. Afaka asiana solontenan'ny firaisana ara-nofo amin'ny endriny rehetra izy ireo, na izany aza, ireto pataloha ireto dia tokony halaina amin'ny tovovavy manga -tanga na tongs. Raha tsy izany, dia ho hita ny antsipirihan'ny tsiranoka mipetaka, izay hanome endrika sary maharikoriko sy tsy hahay handanjalanja.
Top ambony fotsy na fotsy hoditra afaka haka anao - lobaka, ambony, jumper, akanjo na T-shirt misy alokaloka maizina. Ary tena mifanaraka amin'ny zavatra vita pirinty izy ireo. Raha nisafidy tamin'ny zavatra iray monophony ny akanjon'ilay tovovavy iray, amin'ny sary toy izany dia ilaina ny maka akanjo mareva-doko izay tsy tokony hitodika any ivelany. Tena tsara ho an'ny kitapo marevaka, fehiloha lava miaraka amin'ny loko tany am-piandohana na fotsifotsy mamirapiratra.
Jaggings misy tavy ambony
Ny ankamaroan'ny leggings amin'ny denim dia manana tandroka manify, ka mahatonga azy ireo hahatonga ny silhouette ho mendri-kaja kokoa. Tena tsara tarehy toy ny jeggings maitso. Mba hahazoana sary maoderina, mila mifangaro miaraka amin'ny tendron-tsiranoka mangatsiaka sy tsy mafana izy ireo - mainty maitso, maitso, maitso, fotsy, volomparasy, volomparasy na manga. Ankoatr'izay, ilaina ny mandinika ny halavan'ny karazana jeggins toy izany - tsy maintsy mamarana ny tendrony amin'ny tendrony amin'ny rindrankavony izy ireo ary maneho ny manodidina ny tsiranoka ara-pananahana, mandalo ny fidirana amin'ny kiraro.
Jaggins ho vita
Ny ankizivavy sy ny vehivavy manana ny haben'ireo lehibe dia matetika misafidy ny jeggings, izay manampy azy ireo hanitsy ny silhouette ary hanome azy ny fahamendrehana. Mandritra izany fotoana izany dia tsy tokony handratra ny satroka be loatra ny vehivavy manana lamaody toy ny silhouette toy izany, satria manaporofo ny manodidina ny tsy fandriampahalemana sy ny tsy fahampian'ny hoditra, anisan'izany ny cellulite. Tsara kokoa ny manao dzheggins avy amin'ny tavy matanjaka, izay tsara fitondran-tena.
Feno ankizivavy mieritreritra ny zavatra tokony hatao, dia azo atao ireto:
Ny akanjo na ny T-shirts sy ny T-shirt efa ela, miafina 2/3 amin'ny feny;
ny ampahany ambony dia amin'ny endriky ny oversize, ka noho izany dia ny vokatr'ilay fanangonana dia noforonina;
Fitafy marevaka amin'ny baskety na ny maka tahaka azy, manafina ny andilany.
Amin'ny inona ny akanjo dzhegginsy amin'ny ririnina?
Amin'ny vanin-taona mangatsiaka, ireo zazavavy dia misafidy ririnina amin'ny ririnina na felana hafa, izay manome fampiononana sy hafanana miavaka na dia mangatsiaka be aza. Izy ireo dia mifamatotra indrindra amin'ny akanjo lava lava lava lava na akanjo vita amin'ny akanjo , ary koa amin'ny kiraro avo any amin'ny fehikibo na sehatra. Avy amin'ny sokajy ambony ho an'ity kitapo ity no tena mifanandrify tsara ny akanjo lava lava, mameno ny muffler orina na sely lehibe.
Inona no tiana hambara amin'ny akanjo?
Romantic style - tantaran'ny fiaviana, endri-javatra, fahitana maoderina
Ny fitomboan'ny jeans amin'ny vehivavy manana fitongilana avo
Inona no mifanitsy amin'ny loko claret?
Amin'ny inona ny akanjo hoditra hoditra?
Salady «Obzhorka» miaraka amin'ny cracker
Eva Longoria dia mampiseho olona mamitaka eo amoron-dranomasin'i Morbella
Mihena ny alika
Vato sarobidy amin'ny famantarana ny zodiaka
Ny rheomatisma amin'ny tongotra - famantarana sy fitsaboana
Paka miaraka amin'ny tanana manokana
Resadresaka ao anatin'ny nofy
Ny bobongolo elektrika ho an'ny ankizy